पाँच सय वर्षपछि मिलेको यो दिपावलीको संयोग, त्यसैले विशेष छ आजको लक्ष्मीपूजा ! | सुदुरपश्चिम खबर
पाँच सय वर्षपछि मिलेको यो दिपावलीको संयोग, त्यसैले विशेष छ आजको लक्ष्मीपूजा !
आज दीपावलीको दोस्रो दिन तथा लक्ष्मीपूजा । आजको दिन हिन्दू धर्म मान्नेहरुले साँझ लक्ष्मीको पूजा आरधाना गर्ने चलन रहेको छ । यसपटक चाहिँ यो दीपावलीमा निकै ठूलो महासंयोग बनेको छ । तीन ग्रहको दुर्लभ संयोगका कारण यसपटक पाँच दिन मनाइने दीपावली चार दिनमा सिमित भएको छ ।
ज्योतिषाचार्यहरुलाई मान्ने हो भने यो दुर्लभ संयोग सन् १५२१ मा पनि बनेको थियो । अर्थात् आजभन्दा पाँच सय वर्ष पहिले । आज शनिबारको दिन यो विशेष संयोग बनेको हो । अहिले दीप पर्व गुरु ग्रह आफ्नो स्वराशी धनु तथा शनि आफ्नो स्वराशी मकरमा रहने भएको छ । त्यस्तै, लक्ष्मीको स्वग्रह शुक्र कन्या राशीमा हुने भएको छ ।
अनि आज लक्ष्मी पूज ागर्ने समयमा स्वाति नक्षत्र रहने ज्योतिषीहरुले बताएका छन् । यसलाई नै महासंयोग भनिएको हो ।हिजो मात्र हामीले धनतेरस पनि मनाएका थियौँ । धनतेरसको भोलिपल्टै लक्ष्मी पूजाको दिन पर्नुलाई पनि अर्को अद्भुत संयोग मानिएको छ । (gnewsnepal.com बाट साभार)
सञ्चारकर्मी कोरोना प्रभावित भए सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने !